Iko hakuna nzvimbo yekusuwa kana kutya mupfungwa dzeiye anotsvaga Kuziva pamusoro pezvese.
Vol. 1 APRIL, 1905. Nha. 7
KUSVIKIRA inyaya yezvidzidzo zvese zvinofanirwa kudzidza, uye izvo zvakafanira kuti uzive, kana murume achizofambira mberi zvechokwadi. Naizvozvo kuziva zvino ndiyo nyaya yekufunga kwedu.
Kuziva ndiko kwakatangira, chinangwa, uye kuguma kwehurongwa hukuru hwese hweuzivi, saenzi, kana chitendero. Zvese zvinhu zvine kurongeka kwavo, uye kuguma kwezvisikwa zvese kuziva.
Mubvunzo wekuziva uchagara uri kusagadzikana kweiyo inokoshesa zvinhu. Vamwe vakaedza kurasa chinyorwa nekutaura kuti kuziva ndiwo mhedzisiro yechiitiko chesimba uye nenyaya. Vamwe vakabata kuti kuziva kunodarika simba nezvakawanda, uyezve vachiti kunyangwe chiri madikanwa kune vese, asi chakazvimirira pane icho. Vamwe vakati chaisave nyaya pamusoro payo munhu anogona kufungidzira nechero dhigirii repundutso.
Pane zvese zvidzidzo, kuziva ndiyo yakanyanya kunaka uye yakakosha. Kufunda kwayo kunopa mhedzisiro inoshanda kwazvo. Kubudikidza nahwo isu zvido zvedu zvepamusoro zvinowanikwa. Nekuda kwayo zvinhu zvese zvinogoneka. Pane kuziva chete kunoenderana nekuvapo kwehupenyu hwedu uye nekuve. Pasina iyo isu hapana chaizoziva chero chenyika yatinogara kana kuti zvaisazoita kuziva isu uye zvatiri.
Chatinofanira kuzvinetsa pari zvino harisi izwi rekuziva pacharo, asi neicho chinomirirwa neshoko. Kuziva hachisi chinhu chinoziva. Icho chinoziva chakangodaro chete nekuda kwesimba rekuti, icho chirevo.
Kuziva ndicho chokwadi chimwe icho zvinhu zvese zvinotsamira, asi isu kazhinji tinowanzokoshesa zvishoma pane izvozvo kune zvimwe zvinoratidzika zvinonakidza kana chiitiko chiri kupfuura. Zvichida imhaka yekuti inogara iripo nesu zvekuti tinoriruma uye tichiibata serinoteedzana kana kuderera. Panzvimbo pekupa ruremekedzo, ruremekedzo, kunamatira nekuda kwaKe, uye Iye wega; isu isu nekusaziva tinobayira kuna vamwari vedu vanogara vachinja.
Chakavanzika chezvakavanzika, Iyo Yakakura Isingazivikanwe, inofanidzirwa kwatiri neisina kujeka atinoedza kuratidza neshoko kuziva. Kunyangwe kumwe kududzirwa kweshoko iri kungabatwa nepfungwa dzakareruka parizvino, hakuna akararama chero akakura ndiani akagadzirisa chakavanzika chekupedzisira chekuziva. Pane kusapindirana, pfungwa dzichiramba dzichitsvaga, chinyorwa chinova chakakura, chakadzama, chakawandisa uye chisingapfuuri, kusvikira iye anotsvaga, achitambanudza miviri yake, akamira akatariswa: kwechinguva chidiki, kupfuura iyo nguva yenguva, pachikumbaridzo. yeasina kuzivikanwa, mukuremekedza uye akanyarara, iye airatidzika akaperera anonamata kusaziva kusingaperi. Achiwedzeredzwa mune isinganzwisisike, isinganzwisisike, isingataurike, iye akamira mukati mekunze kwemiganhu yenguva, kusvikira iko kushamisika, chishuvo chekuziva, kunzwisisa, kuisa mupfungwa izvo zviri pamusoro peiyo nzira yekufunga, kuisa mumashoko izvo zvisingagoni kutaurwa, zvinogonesa pfungwa uye chiono chakundikana. Kudzokera kunzvimbo iyo kufunga kwakasungwa nemipimo, anozviwana zvakare mune iripo, achirangarira zvakapfuura uye kutarisira ramangwana. Asi haagone kuve zvakare nekusaziva zvachose: anonamata achiziva sekuratidzwa kuburikidza neisina kukwana nhamba yemafomu uye nyika.
Kuziva kamwechete kwakanyanya kuoneka, kwakanyanya nyore, kwakanyanya uye kusinganzwisisike chokwadi. Zvese zvakasikwa zvakavezwa kuziva. Kuziva hachisi chinhu, nzvimbo, kana chinhu; asi kuziva kune mukati mezvinhu zvese, kuri munzvimbo yese yenzvimbo, uye kuri mukati nekukomberedza maatomu ese ezvinhu. Kuziva hakuchinji. Nguva dzose zvinoramba zvakadaro. Kuziva zvimwechetezvo mune imwe translucent kristaro, muzambiringa unokambaira, mhuka hombe, murume anokudzwa, kana mwari. Iyo inyaya iri kuramba ichichinja muhunhu hwayo, hunhu, uye madhigirii ebudiriro. Kuziva kunoratidzwa uye kunoratidzwa kuburikidza nenyaya kunoonekwa muchimiro chimwe nechimwe kuva kwakasiyana, nepo musiyano uripo mumhando yezvinhu chete, kwete mukuziva.
Kuburikidza nezvose zvirevo nemamiriro ezvinhu enyaya, kuziva kune nguva dzose. Izvo hazvimboshanduke mune chero nzira, kana pasi pemamiriro ezvinhu chero chipi chinhu kunze kwekuziva. Zvese zvinhu, zvakadaro, zvinoziva uye zvakaiswa mumatunhu manomwe kana madhigiri ayo anowanzodaidzwa kunzi nyika dzekuziva, asi ayo ari echokwadi mamiriro enhau, uye kwete ekuziva.
Kubva pane yakaderera kusvika kumusoro-soro nzvimbo, chinangwa chekuumbwa nekushandurwa kwechinhu ndechekugadzira mafomu nemitumbi nekuzvigadzirisa kunge mota dzekutaura kwekuziva. Nyika dzenyaya makirasi akasarudzika kana madhigirii ekuvandudzwa kwechinhu. Iyi inzvimbo inoumba zvakasikwa zvese, kubva kuzvinhu zviri nyore kwazvo kusvika pane izvo zvakanatswa zvakagadziriswa mwari wepamusoro-soro.
Chinangwa chekushanduka shanduko yechinhu kudzamara pakupedzisira wave kuziva. Kubva pamamiriro ayo ekutanga asina kugadziriswa, nyaya inoenderera mukukura kwayo kusvika pakuziva, kuburikidza nechimiro, kukura, pfungwa, ruzivo, kusava noudyire, humwari.
Mamiriro ekutanga ezvinhu inyaya yekutanga kana yeatomu. Mune ino mamiriro ezvinhu haina chimiro uye inoziva mune yakapusa dhigirii chete.
Iyo yechipiri mamiriro ezvinhu ndeye mineral kana mamorekuru. Mune yekutanga mamiriro maatomu anoputika, uye nekuda kwekuvandudza kwekutanga, anodhiza mamwe maatomu mashoma akagadzirwa nezvazvo. Nezvinhu izvi zvinosanganisa, zvinoremadza, zvinopinda mukati, mune fomu yakasimba yedhinari, uyezve inoziva mamiriro akasiyana neatomu. Seatomu yaiziva mamiriro ayo chete, iyo yaisapa mukana wekutaura kwekuziva kunze kwemamiriro ayo asina hukama. Kana atomu isanganiswa nemamwe maatomu, inowedzera mukukura kwayo kusvika pakuziva, inotungamira maatomu ayo ari muzinda, uye ichipfuura ichibva kune isina fomu atomiki yenyika yekumanikidza kuenda kumamero mamiriro emineral, kwainokura ichiita fomu. . Iyo mineral kana mamorekuru mamiriro ezvinhu ane hukama hwakasimba hwezvinhu zvekutanga uye inoratidza pesimba rakasimba pane zvese zvekutanga masimba. Simba iri rinoratidzwa mumagineti.
Chechitatu mamiriro ezvinhu iri yemiriwo kana cellular. Atomu iyo yakatungamira mamwe maatomu uye ikava mamorekuru, inokwezva zvishoma mamorekiyumu uye anovatungamira kubva mumamoleji mamiriro ezvinhu, ayo anoumba amineral empire, kupinda mune inozivikanwa cellular mamiriro ezvinhu, akasarudzika seumambo hwezvirimwa, uye inova sero. Cell cell inoziva mune imwe dhigirii kupfuura mamorekuru ezvinhu. Kunyange basa re molekyuta raive rechimiro rakamira, kuita kwesero kukura mumuviri. Pano nyaya inovandudzwa kuburikidza nehupenyu.
Iyo yechina mamiriro ezvinhu imhuka kana kuti organic. Atomu iyo yakatungamira mamwe maatomu kupinda musero mamiriro, uye ichibva ichienda munharaunda yenyika yese yehukama miriwo, ichipfuura sero ichipinda mumuviri wemhuka, uye iripo ichikurudzirwa ne kuziva sekutsanangurwa kwemhuka, inoshanda mune chimwe chinhu. mune mhuka, uyezve inodzora nhengo uye inozopedzisira yatanga kune inoziva organic mhuka yechinhu, icho chiri chishuwo. Izvo zvinobva zvatanga kutonga uye kufambira mberi, kubva kumhuka iri nyore yemusango kusvika kune yakanyanya kuoma uye yakakwenenzverwa mhuka.
Iyo yechishanu mamiriro ezvinhu ipfungwa dzemunhu kana ini-ini-ini. Mukufamba kwezera risingaverengeke, iyo isingaverengeki atomu iyo yakatungamira mamwe maatomu kupinda mumineral, kuburikidza nemiriwo, uye kusvika kune mhuka, pakupedzisira inosvika yakakwirira mamiriro ezvinhu umo inoratidzira iyo imwe kuziva. Kuve nhengo imwechete uye kuve neiratidziro yekuziva mukati, inofunga uye inotaura pamusoro payo seni, nekuti ndiri chiratidzo cheiyo. Sangano remunhu rine pasi pekutungamira kwayo yakarongeka muviri wemhuka. Chikamu chemhuka chinomanikidza imwe neimwe yenhengo dzayo kuita rimwe basa. Chikamu chechikamu chimwe nechimwe chinotungamira rimwe rayo maseru kuita rimwe basa. Hupenyu hweesero rega rega rinotungamira yega yega mamorekuru kukura. Magadzirirwo emorekuru imwe neimwe anobatanidza imwe neimwe maatomu ayo kuita fomu yakarongeka, uye kuziva kunosimbisa atomu yega yega nechinangwa chekuzviziva. Maatomu, mamorekuru, masero, nhengo, uye mhuka, zvese zviri pasi pekutungamirirwa kwepfungwa-mamiriro ekuzviziva mamiriro ezvinhu-iko basa rinofungwa. Asi pfungwa hadziwane kuzviziva, iko kukura kwayo zvakakwana, kudzamara yakunda uye yakadzora zvishuvo zvese nekufungidzira kwakagashirwa kuburikidza nemanzwiro, ndokuisa pfungwa dzese mukuziva sekuzviratidza kwazviri. Ipapo chete ndipo pangozviziva zvizere; uye kumubvunzo wawo: Ini ndiri ani? Inogona neruzivo, pindura: Ndini. Uku kusaziva kusafa.
Iyo yechitanhatu mamiriro ezvinhu ndiyo mweya wevanhu kana ini-ini-Iwe-uye-Iwe-ndiwe-I. Pfungwa yakunda kusachena kese pazvinhu zvayo uye yakawana kuzviziva, inogona kuramba isingafi mune ino mamiriro; asi kana ikatsvaga kuve yechokwadi inozoziva kuziva sekuratidzwa kwese mupfungwa dzemunhu. Inopinda muchimiro chekuva mundangariro dzevanhu vese.
Mune aya mamiriro I-am-Iwe-uye-Iwe-ndiwe-Ndo-ndinopaza vanhu vese uye vanozviona sevanhu.
Iyo yechinomwe mamiriro ezvinhu ndiMwari kana huMwari. Iwo mweya wevanhu kana Ini-ini-Iwe-uye-Uri-iwe-iwe, uchizvipa wega kuti unake zvese, unova wehuMwari. Vamwari vanobatana kuva mumwe, mwari senge vanhu, vanhu, mhuka, zvinomera, michero, uye zvinhu.
Isu tinozvivona isu tiri vanhu mupfungwa yekuti iwo mumwechete kuziva unoratidzwa mupfungwa dzedu. Asi pfungwa dzedu dzinotaridzawo nyika dzakasiyana dzechinhu dzinoratidzika senge zvisingaverengeki manzwiro, zvishuvo, uye zvishuvo. Kukanganisa kusanzwisisika, evanescent, nekusashandura kuziva kusingaperi, mumwe nemumwe anozvizivisa nemutumbi panzvimbo pekuziva. Ichi ndicho chikonzero chekusuwa kwedu kese nekusuwa. Kubudikidza nekuziva mukati medzo pfungwa dzinoziva nezve dzisingagumi uye dzinoshuvira kubatana nazvo, asi pfungwa hadzisati dzave kusarudza pakati pechokwadi neyenhema, uye mukuyedza kwayo kuita izvi kusarudzika kunotambura. Kuburikidza nekuenderera mberi kuedza mumwe nemumwe wedu pakupedzisira achasvika golgotha ​​yekutambudzika uye nekurovererwa pakati penyaya yepasi pemhirizhonga uye nekubwinya kwenyika yepamusoro. Kubva pane kurovererwa uku achamuka munhu mutsva, amutswa mukuziva kubva kune wega ane moyo wekuziva pfungwa, kune iyo I-am-You-You-You-I-mweya wemuunganidzwa wevanhu. Saka nekumutswa iye ndiye anokurudzira kukurudzirwazve kuedza kubatsira vamwe, uye gwara mune vanhu vese avo vanoisa kutenda kwavo mune Mumwechete Kuziva.